Kurera Shanduko kuburikidza neSocial Media Kutengesa Felingi | Martech Zone
Kurera Shanduko kuburikidza neSocial Media Sales Funnel
Chishanu, July 25, 2014 Chitatu, Nyamavhuvhu 30, 2017 Douglas Karr
Iyi inoshamisa infographic inotsigirwa neTollFreeForwarding inofamba pakati nepakati bhizimusi kana mushambadzi kuburikidza ne6 kiyi dzekuti uwane kutyaira kutengesa kuburikidza nesocial media: Kuzivisa, Kufarira, Kutendeuka, Kutengesa, Kuvimbika uye Advocacy.
Ma funnel anotengeswa ave achishandiswa kuburikidza nenyika yekutengesa nekuti zvinopa nzira yekurerutsa nekufungidzira nzira yemutengi kubva pakutanga kusvika pekupedzisira chiito. Pachinyakare izvi zvaireva kubva pekutanga poindi yekuziva kusvika pakutengesa, asi munyika yanhasi yemagariro, inowedzera kupfuura izvo. Jodi Parker
77% yevatengi vepamhepo vanobvunza ratings uye ongororo vasati vatenga uye 80% yevatengi vanotarisira kuti mabhizinesi ave anoshanda munzanga midhiya
Zvemagariro midhiya isvikiro senge hapana imwe kwausingangowana mukana wekutengesa, une mukana wekuti vatengi vako vatengese panzvimbo yako! Ndine chokwadi kana iwe ukapinda kune chero nzvimbo yemagariro nhasi, iwe unowana vanhu vachitsvaga zvigadzirwa zvako kana masevhisi. Uripo here pavanobvunza? Vatengi vako varipo uye vanofara newe zvekuti vanopindura?
Heino infographic iyo inoisa yakajeka tsananguro yeiyo Yemagariro Midhiya Yekutendeuka Yekushandisa:
Tags: pasocial media kutendeuka fanerasocial media shandukopasocial media kukurudzirasocial media sales fanera